गायिका तारा केसी संग गरिएको- मिठो भलाकुसारी - PT Online News
गायिका तारा केसी संग गरिएको- मिठो भलाकुसारी
२ श्रावण, २०७७ १९:२१
@पिटि अनलाइन न्युज
साउन २ गते शुक्रबार,
चितवन- वुबा खड्क बहादुर रोक्का र आमा लीला रोका को कोखबाट ठुली छोरीको रुपमा बि.सं. २०४८ सालमा खोटाङ जिल्लामा जन्मिएकी मिठो स्वरकी धनि सालिन स्वभावकी गायिका/सर्जक तारा केसी नेपाली गीत संगीतको क्षेत्रमा फड्को मार्दै छिन्। हाल उनि आफ्नो करियरको निम्ति रोजगारीको सिलसिलामा चितवनमा बसोबास गर्दै बिभिन्न कार्यक्रम हरुमा सहभागी हुँदैआइरहेकी छिन्।
उनको सानै देखि नै नेपाली गित संगीतमा लाग्नु रुचि थियो अहिले आएर त्यो सपना सार्थक बनेको छ परिवारको र दर्शक हरुको राम्रो रेसपोन्स अनि साथ सहयोग हौसलाले गर्दा आज यहाँसम्म आईपुग्न सफल भएकी छु भन्दै उनले खुसी र आभार व्यक्त गरिन्।
पुरा भिडियो हेर्नुहोला खोटाङको हावा सरर …………..
अब हेरौं उहाँसंग पिटि अनलाइन न्युजको संचालिका प्रनिशा रिमालले गर्नुभएकि छोटोमिठो भलाकुसारी जस्ताकोतस्तै प्रस्तुत गरेका छौं।
१ प्रश्न:- तारा जि तपाईँको बाल्यकाल अवस्था कस्तो थियो ?
उत्तर:- मेरो बाल्यकाल कहालीलाग्दो छ। म एउटी गाउँले परिवेशमा जन्मिएर, हुर्किएकी नारी हुँदा घाँस दाउरा गोठाला, मेलापात गरेर जीवन व्यतीत गर्नुपर्यो। पहिलो सन्तान मेरो आफ्नो दाइ नभएकै कारणले एउटा घरको छोरा ले निभाउनुपर्ने बोझ, जिम्मेवारी म आफैले निभाउनु पर्ने बाध्यताले गर्दा म एउटा नारी भएर पनि पुरुषले सो सरह अघि बड्दै आज यो ठाउँमा उभिएकी छु । पढाईलाई निरन्तरता दिन सकेनन् यद्यपि अझै धेरै संघर्ष गर्दै अघि बड्ने अठोटका साथ संघर्षको मैदानमा उत्रिएकि छु। मेरो बाल्यकाल यसरी नै बित्यो धेरै लामो काहानीहरु छन्। तर अहिलेलाई भने यती नै।
२ प्रश्न :- तपाईं यो क्षेत्रमा कसरी लाग्नु भयो..?
उत्तर:- वास्तवमा यो क्षेत्रमा लाग्नु भन्दा अगावै बाल्यकाल अबस्था देखि नै मेरो रुचि चाहिँ गित, संगीत क्षेत्रमा लागेर केही गर्छु भन्ने तर दाजु भाइ नभएको कारणले अलि असहज भयो। तथापि यो क्षेत्रमा आवद्ध भैइ एउटा एल्बम निकल्छु भन्ने सोच लिएर अघि बढिरहेको थिए। अन्तत: दुईवटा गित रेकर्ड गर्न सौभाग्य मिल्यो। मेरो अन्य गितहरु पनि बजारमा आउन लागेको छ। तर कोरोनाको महामारिले गर्दा स्थगित भएको छ। अब छिट्टै २ वटा आधुनिक गित बजारमा ल्याउने दौडमा छु।
३ प्रश्न:- तपाईंको पहिलो गीति एल्बम कुन हो? र कतिवटा एल्बम निकाल्नु भयो ?
उत्तर:- दुईवटा पुर्बेली लोक भाका हुन् । जुन गीतमा मेरो आफ्नै स्वर छ साथमा लब्ली भीमले स्वरमा साथ दिएको छ सब्द सिर्जना आफ्नो हो ।(पहिलो) १. भोजबुडाको हावा सररर……. आउँदैछु ऎ कान्छा हतार नगर। (दोस्रो) २. सुनकोशीको तिरैतिर…… अभागी भैइ जन्मिए छ बाँचुन्जेल पिरैपिर
४ प्रश्न :- आगामी योजना हरु के-के रहेको छ ?
उत्तर:- मेरो योजना त यहि हो पनि नभनौ हुनत मेरो एम यहि हो यसैलाई निरन्तरता दिनेछु। आगामी दिन हरुमा पनि गित संगीत मै लागेर केहि गर्ने मेरो योजना छ।
५ प्रश्न:- यहाँले एजुकेसन कति सम्म पुरा गर्नुभयो ? भन्न मिल्ला ?
उत्तर :- मिल्छ किन नमिल्नु घरकी जेठी छोरी भएकै कारण चाहेर पनि घरायसी परिस्थितिले गर्दा १० कक्षामै ब्रेक मारेकी हु। किनकि आफ्नो बारेमा भन्दा पनि मेरी बहिनीहरुको हेरचाह गर्नुपर्ने, भबिस्य हेर्नपर्छ भन्ने मेरो उदेश्य थियो । फलस्वरूप अहिले मेरो बहिनीहरुले कलेज, कोहि ब्याचलर गरेकी छिन् समग्रमा राम्रो पढेकी छिन यसैमा गर्व लाग्छन् ।
६ प्रश्न :- पहिलो यात्रा कसरी सुभारम्भ भयो?
उत्तर:- अघिनै भनिहाले मेरो यात्रा त अरु के नै भन्नू छर हो म यहि हो मेरो चाहाना एहि नै थियो म आफ्नो सपना पूरा गर्नको लागि अगाडि बढे मेरो यात्रा लोकगित बाट सुरु भयो दोहोरी गाए अब आधुनिक गाउने वाला छु।
७ प्रश्न :- यो क्षेत्रमा लागेर यो ठाउँ सम्म पुग्छु भनेर सोच्नु भएको थियो ?
उत्तर:- खासै त्यस्तो सोचाई चाही थिएनन्। तरपनि म एउटा गित आफ्नो भोकल दिन्छु भन्ने चाहिँ थियो । त्यो पनि सफल भयो अहिले म यो अबस्थामा आउछु र पुग्छु भन्ने चाहिँ सोचेको थिएन। यो त सुरुवात हो अझै धेरै गर्नु छ ।
८ प्रश्न :- परिवारको कतिको साथ मिलेको छ?
उम!! मेरो परीवारको साथ सपोर्ट भरपुर मिलेको छ र मेरो सपना पनि परिवारकै सहयोग बाटै बिस्तारै पूरा हुँदैछ।
९ प्रश्न :- तपाईं आउने नयाँ कलाकारहरुलाई के संदेश दिन चहानु हुन्छ?
उत्तर :- संघर्ष नै जीवन हो संघर्ष गर्दै यहाँसम्म आएकी हु। जुनैपनि काम गर्दा सुरुमा असजिलो हुन्छ। कलाकरिकता क्षेत्रमा पनि राम्रो भबिष्य छ। कुशल अग्रज कलाकारको हात समाउनुहोस, कलाकार बन्न रहरले मात्रै हैन कर्मले मिहेनतका साथ् लाग्नुस्, पक्कै ढिलो चाँडो सफलता मिल्नेछ म नयाँ साथी हरुलाइ पनि यहि नै भन्न चाहान्छु। नयाँमा आज तपाइलाई कसैले चिन्दैन भोलि अबस्य चिन्नेछ।
१० प्रश्न :- अन्तमा हाम्रो दर्शक स्रोताहरुको लागि र पिटि अनलाइन लाई के भन्न चहानुहुन्छ?
उत्तर:- अन्तमा आदरणीय दर्शक स्रोताहरुको माया साथ सपोर्ट बिना कलाकार अधुरो रहन्छ, यसरी नै निरन्तर मेरा सिर्जनाहरुलाई माया गरि दिनु होला, हौसलामय, सकारात्मक सुझाव दिनुहोला। म यहाँहरु प्रती कृतज्ञता छु। कलाकारको कला चिनाउन, फिजाउन मिडियाको पनि ठूलो भुमिका हुन्छ। त्यसैले प्रनिशा जि लगायत पिटि अनलाइन परिवारप्रती यो सुबर्ण मौका जुराई दिनु भएकोमा अत्यन्त आभरी छु। धन्यवाद ।
पुरा भिडियो हेर्नुहोला सुनकोशी तिरैतिर …………..
सुर्खेतका गगन रावल सधैंका लागि कोरियामै निधाए
कुवेतको राजा शेखको ९१ वर्षको उमेरमा निधन।
कुवेतमा कोरोना संक्रमित बढ्दै आज ६८७ जना नयाँ संक्रमित।